1. कुन राम्रो हो, फ्लानेल वा कोरल ऊन?
फ्ल्यानेल: ऊन कच्चा मालको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, आलीशान अपेक्षाकृत राम्रो र कम्प्याक्ट छ, धेरै बाक्लो छ, र राम्रो न्यानो अवधारण प्रभाव छ। छाला-अनुकूल र नरम, विकृत गर्न सजिलो छैन। र टेक्नोलोजीको विकासको साथ, हालको फ्ल्यानेल पजामा मोटा महसुस गर्दछ, साबर राम्रो छ र कपाल झराउन सजिलो छैन। यद्यपि, फलानेलको वजन अपेक्षाकृत उच्च छ, र यसलाई सफा गर्न सजिलो नहुन सक्छ।
कोरल ऊन: पलिएस्टर फाइबरसँग प्रशोधन गरिएको, कपडामा लेयरिङ र समृद्ध रंगहरूको बलियो भावना हुन्छ। बलियो पानी अवशोषण, कपास भन्दा तीन गुणा। कोरल ऊन पजामामा राम्रो न्यानो अवधारण र एक नाजुक अनुभूति छ। यद्यपि, मानव निर्मित फाइबर जस्ता सामग्रीहरूको कारण, एलर्जी शरीरहरूले छालामा चिलाउने र रातोपन अनुभव गर्न सक्छ।
2. रेशम वा जाल, राम्रो सेक्सी पायजामा।
रेशम: पजामा एक चिल्लो र नरम बनावट र एक नाजुक स्पर्श छ। यसमा शुद्ध कपास भन्दा राम्रो नमी अवशोषण र हावा पारगम्यता छ, र राम्रो छाला हेरचाह र स्वास्थ्य हेरचाह प्रभाव पनि छ। यद्यपि, रेशम पजामा अधिक महँगो छन्, तर तिनीहरूसँग मोती जस्तो चमक छ र महान र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ। रेशम पजामा अधिक नाजुक हुन्छन्, त्यसैले तपाईंले तिनीहरूलाई धुँदा र मर्मत गर्दा ध्यान दिन आवश्यक छ। तपाईं गर्मीमा सस्पेन्डरहरूसँग पजामा र शरद ऋतु र जाडोमा गाउन वा विभाजित शैलीहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। दुई टुक्रा वा थ्री-पीस स्टाइलहरू वर्षैभर लगाउन सकिन्छ।
मेष: पजामा कपडा पहिरन प्रतिरोधी र टिकाऊ छ। सतहमा लुमिङ चमकले मध्य-देखि-अन्त-अन्त फेसन भावना प्रकट गर्दछ। यो एक धेरै सेक्सी महिला पायजामा हो। जाल पजामामा राम्रो लोच र उच्च शक्ति छ, जसले मानिसहरूलाई लुगा फुट्ने चिन्ता नगरी स्वतन्त्र रूपमा तन्काउन अनुमति दिन्छ। मेष पजामा सामान्यतया डिजाइनमा बोल्ड हुन्छन्, जसले महिलाहरूको सौन्दर्यलाई चरममा झल्काउन सक्छ। यो दुई-व्यक्ति संसारमा एक अपरिहार्य सेक्सी पायजामा हो। सामान्यतया, सस्पेन्डर पजामा र नाइटड्रेसका धेरै शैलीहरू छन्, र तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार किन्न सक्नुहुन्छ।